चर्चित सञ्चारकर्मी रबि लामिछाने लेख्नुहुन्छ: धर्म गर्न घरबाट निस्केको मान्छे पाप गरेर घर फ`र्कियो (हेर्नुहोस् भिडियो) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > चर्चित सञ्चारकर्मी रबि लामिछाने लेख्नुहुन्छ: धर्म गर्न घरबाट निस्केको मान्छे पाप गरेर घर फ`र्कियो (हेर्नुहोस् भिडियो)
चर्चित सञ्चारकर्मी रबि लामिछाने लेख्नुहुन्छ: धर्म गर्न घरबाट निस्केको मान्छे पाप गरेर घर फ`र्कियो (हेर्नुहोस् भिडियो)
admin September 4, 2020 भिडियो, समाचार	0
काठमाडौँ । चर्चित सञ्चारकर्मी रबि लामिछाने निषेधा’ज्ञाकै समयमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्न सयौँ’को सं`ख्यामा स्थानीय भेला भएपछि पुल्चोक तनाव’ग्रस्त बनेको छ । प्रहरी र स्थानीय बीच रथ`यात्राका विषयमा वि’वाद हुँदा स्थिति तनाव’ग्रस्त बनेको हो ।भी’ड हटा उन प्रहरीले पा’नीको फोहरा प्र’हार गरेको छ । यसअघि स्थानीयले प्रह’रीमाथि ढु`ङ्गा’मुढा गरेका थिए । आ’क्रोशित भीडले प्रह’रीको गाडीमाथि पनि ढुंगा हानेका छन् ।
तना’व हुँदा केही प्रहरी घा’इते भएका छन् । रथ तान्न भेला भएका स्थानीयलाई प्रहरीले ल’खेटेको छ । सडकको बीचमा ठूलो संख्यामा उपस्थित प्रह’रीले सडकबाट भी’ड पन्छाएर रथलाई घेरेर बसेका छन्। लामो समय’देखि थाती रहँदै आएको रातो मच्छिन्द्र नाथको रथलाई निषेधा’ज्ञाकै बीच आज तानिएको हो । मल’मास अगाडिनै मच्छिन्द्रनाथलाई बुंग’मती लानुपर्ने प्रचलनका कारण स्थानीय सयौँको संख्यामा पुल्चोकमा जम्मा भएका थिए ।
त्यस्तै जावलाखे’लमा ड्युटीमा रहेका ट्राफिक प्र’हरीमाथि कु’ट’पिट भएको छ । रातो मछिन्द्रनाथको रथ तान्न नदिएपछि उनीमाथि स्थानीयले नि’र्घात कु’टपि’ट गरेका हुन् । कोरोना संक्रम’ण जोखिमले धेरै भिड’भाड नगर्न भनिए पनि स्थानीयले त्यसको उल्लं’घन गरेपछि प्रहरीले रोक्न खोजेको थियो ।
रथ तान्न रोक्न खोजेपछि प्रहरीमाथि स्थानी’यले आ’क्रमण गरेका थिए, योहो टिभिले पोस्ट गरेको भिडियोमा स्थानीयले एक ट्राफिक प्रहरीलाई नि’र्घात रुपमा कु’ट’पि’ट गरेको देखिन्छ । स्थानियको आक्र’मण पछि उनी भाग्छन् तर त्यहाँ उपस्थित ले कुदाई कुदाइ कु’टपि’ट गरेका छन् । कुटपिटको बिरोध गर्दै चर्चित पत्रकार रबि लामिछानेले यस्तो पोस्ट गरेका छन् । उनले लेखेका छन्:
०७७ साल भाद्र २० गते, तथा ईश्वी सन् २०२० सेप्टेम्बर ०५ तारिख शनिबार हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
कोरियाबाट नेपाल फर्कन हिडेका ३७ नेपालीलाई इन्छन एयरपोर्टबाट किन फर्कायो ? हेर्नुहोस्
झण्डै खसेको प्लेन ! भिडियोमा हेर्नुस डोल्पा एयरपोर्टको दुर्दशा – निकै डर लाग्ने भिडियो
मोरङको लेटाङमा श्रीमती द्वारा श्रीमानमाथि खुकुरी प्रहार
विमान दुर्घटना: एक नेपाली चेली को मृत्यु भने एक नेपाली युवा बाच्न सफल तर..(भिडियो सहित)
हजाराैं किलोमिटरको हिडेपछि यी टुहुरा बालबालिकाले भेटे भगवान !